TV Show | News Filmy | Page 7
ब्ल्याक ड्रेसले जुरायो सुनील रावललाई पर्फेक्ट वाईफ
छोटो समयमा टप प्रोड्यूसरको ट्याग भिरेका सुनील रावल र उनको श्रीमती दुर्गिससंग नरेश भट्टराईले गरेको लभ लाईफ शो हेर्नुस । यो शोमा दुर्गिस र सुनीलको पहिलो भेट कसरी भयो ? दुर्गिसले सुनीललाई किन आफै प्रपोज गरिन लगायतका थुप्रै रमाईला प्रसंगहरु छन् ।
साता भरीका फिल्मी गतिविधि, कुन फिल्म कहिले रिलिज हुँदैछन् , कुन फिल्मसंग कसको लडाई ? यो साताको क्ल्यापबोर्डमा राजन घिमिरेले तयार गरेको प्रोफेश्नल रिपोर्टहरु हेर्नुहोस् । साथमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ ‘मुटु’ फिल्मका लागि गायक राजेश पायल राईद्धारा गीत रेकर्डिङ गरिएको रिपोर्ट पनि ।
भिनाजु बिजय लामाको नजरमा आलोक नेम्वाङ किन जोगी ?
७ सय को हाराहारीमा म्यूजिक भिडियो निर्देशन गरिसकेका आलोक नेम्वाङ हालको समय ‘अझै पनि’ शिर्षकमा तेश्रो नम्बरको फिल्म निर्देशनको तयारीमा छन् । झण्डै पाँच बर्षको अन्तरालमा फिल्म निर्देशनमा फर्किने तयारीमा रहेका उनले टि.टिभी टक शोमा अमन प्रताप अधिकारीसंग रमाईलो कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीलाई थप रमाईलो बनाउन अभिनेता समेत रहेका उनका भिनाजु बिजय लामाले आलोकलाई जोगी भनेर म्यासेज छाडेका छन् ।
क्ल्याप बोर्ड : बीर समशेर र शाहजादीको चिना किन मिलेन ?
यो साता प्रसारित कार्यक्रम क्ल्याप बोर्डमा तपाईले ‘अधकट्टी’ र ‘जन्मभूमी’ को शुभमुर्हत समारोहका झलक हेर्न सक्नु हुनेछ भने एतिहासिक कृति माथी छायाकंनरत फिल्म ‘सेतो बाघ’को सुटिङ रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुनेछ । साथमा मनोरञ्जन गतिविधि भित्र रिलिजको तयारीमा रहेका फिल्मका बारेमा जानकारी सहित चलिरहेका गीतहरुबाट समेत मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ । हेर्नहोस कार्यक्रम
हाष्य सम्राज्ञी बसुन्धरा भुषाल कति महान ?
हाष्य सम्राज्ञी बसुन्धरा भुषाल मनकी कस्ती छिन् ? उनको स्वभाव र बिचारहरु कस्ता छन ? टि.टिभी टक शोमा नरेश भट्टराईसंगको कुराकानीमा फिल्म क्षेत्रमा गर्नु पर्ने आफ्ना सपनाहरुको बारेमा उनले बोलेकी छिन् । साथमा उनले नेपालको पहिलो निर्देशक को हो भन्ने बिषयमा विवाद चलिरहेका बेला हिरा सिंह खत्री पहिलो निर्देशक हो भनी दाबी गरेकी छिन् । हेर्नुस कार्यक्रम टि.टिभी टक शोमा बसुको ईन्टरभ्यू ।
क्ल्याप बोर्ड : सञ्चार मन्त्री भन्छन् ‘बोर्डमा के गर्छु हेर्दै जानुस न’
March 9, 2014 3:57 am
नव नियुक्त सञ्चार मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले सञ्चार मन्त्रालयको कुर्सी सम्हाल्न नपाउदै चलचित्र बिकास बोर्डको भ्रमण गरेका छन् । उनले बोर्ड भ्रमणका क्रममा भनेका छन् ‘के गर्छु हेर्दै जानुस न ।’ साथामा हप्ता भरिका मनोरञ्जन गतिविधिलाई क्ल्याप बोर्डमा राजन घिमिरेले समेटेका छन् । हेर्नुस कार्यक्रम ।
हेर्नुहोस् : यो साता प्रशारित फिल्मी कार्यक्रम क्ल्याप बोर्ड
यो साता प्रशारित फिल्मी कार्यक्रम क्ल्याप बोर्डमा विदा खान भिड्ने फिल्मका बारेमा रिपोर्ट : विकास आचार्य भन्छन् ‘नाईं न भन्नु ल -२ फरक प्रस्तुतीमा बनाउने प्रयास गरिएको छ । ‘ गीतकार होमनाथ न्यौपानेको पिडा : फिल्ममा लेखेका गीत मरे भन्छन उनी । साथमा अन्य मनोरञ्जन गतिविधि । हेर्नुहोस् कार्यक्रम राजन घिमिरेका साथ ।
ISSUE OF THE DAY : कथाले के माग्छ ?
रेखा थापा भन्छिन् ‘मैले अंग प्रदर्शन गरेको छैन, कथाले के माग्छ यो पत्रकारले बनाएको प्रश्न ।’ निशा अधिकारीको बिचारमा कथालाई मगाईन्छ भने स्क्रिप्ट राईटर दोषी । उनले मायाज बारको आफ्नो गीतलाई आईटम नम्बर भन्न पनि रुचाईनन् । यो साता ईश्यू अफ द् डेमा फेमश मिडिया पर्सन अनुज थापाले हिरोइन द्धय रेखा थापा र निशा अधिकारीसंग ‘कथाले के माग्छ ?’ बिषयमा आफ्नो अन्र्तरवार्ता केन्द्रित गरेका छन् । हेर्नुहोस यो रोचक अन्र्तवार्ता